Nhau - Ko siringi Inoshanda Chiedza haigone kuiswa muOO Kamuri ine Yakadzika Pasi Hurefu?
Mumakore mazhinji ekutengesa uye neruzivo rwekugadzira, isu takaona kuti vamwe vatengi vanovhiringidzika pakutenga chiedza chekushandisa.
Kune a siringi inoshanda chiedza, Kukwirira kwayo kwakaringana ndeye 2.9 metres. Asi muJapan, Thailand, Ecuador, kana dzimwe nyika dzemuAfrica, nzvimbo dzekushandira dzinowanzo derera kupfuura 2.9 metres pakureba. Havagone kuisa siringichiedza chekushandisa?
Pano isu tinofanirwa kukurudzira mubvunzo nezve yekumisikidza kureba, uye isu tinofanirwa kusimbisa nemutengi tisati taisa odha. Iyo inonzi yekukwirira kureba, ndiko kuti, kukwirira kwepasi, inoreva kureba kubva padenga rekushongedza kusvika pasi, kwete kukwirira kubva padenga kusvika pasi. Ehezve, kuchine mamwe makamuri ekuvhiya ayo asina ino siringi yekushongedza. Kune yerudzi urwu rwekushandisa kamuri, iyo yekumisikidza kureba ndiyo daro kubva padenga kusvika pasi.
Dzokera kumusoro wenyaya zvakare, ndedzipi mhando dzemhinduro dzatinadzo sehunyanzvi hwekushandisa mwenje mutengesi ane makore makumi maviri. Ndokumbira utarise maitiro ekutengesa pakati pangu nemutengi wangu mutsva Ecuador.
Mutengi arikutenga mwenje miviri-yemwenje yeUSV inoshanda yekiriniki yemhuka. Ndisati ndaisa odha, ini ndinomuda kuti ape iyo yekumisikidza kureba. Mufananidzo uri pazasi ndiyo nzira yekuyera kureba yaakatumira kumashure.
Zvinopedzisira zvasimbiswa kuti kukwirira kwepasi kungori 2.6 metres, iyo isingasvike chiyero chehurefu chinodiwa chemamirimita 2.9.
Mushure mekutarisa kureba kwese kwechiremba nekusimudza kwetafura yekushanda, takafunga kutora chirongwa chakamisikidzwa chekumisikidza.
Isu takagadzirazve chigadziko chemwenje uye takaita madhirowa evatengi kuti vasimbise. Mutengi anobvuma kune yedu dhizaini dhizaini.
Mushure mekugamuchira izvo zvinhu uye nekuzvishandisa kwenguva yakati, mutengi anogutsikana kwazvo.
Gare gare, achiri kushanyira imba yake nyowani yekuvhiya, shamwari yake yechiremba akagadzirisa zvekare LED ine misoro miviri chiedza chekushandisa.
Pano, ndinotenda nemwoyo wose chiremba wemhuka akandibatsira kundireva. Inofanirwa kuve zvigadzirwa zvedu zvinovimbika uye nehanya mushure mekutengesa-basa vafambisa vanachiremba.
Kubudikidza neiyi kesi yekutaurirana, isu tinoziva kuti iyo yekuvhiya imba ine pasi pehurefu hwe 2.6m ichine mamiriro ekuisa siringi chiedza chekushandisa.
Asi pane zvimwe zvimwe nyaya, senge kukwirira kwenzvimbo yekushandisa ingangoita 2.4m, mune ino kesi, isu tinokurudzira vatengi kushandisa madziro-mhando chiedza chekushandisa kana nharembozha chiedza chekushandisa.
Pazasi isu zvakare tine yekuisa madhirowa ekureva.
Kubva panguva ye halogen OT mwenje kune LED OT mwenje, kambani yedu ine makore angangoita makumi maviri ezvakaitika mukugadzira, kugadzira uye kuisa mwenje yekuvhiya kumba nekune dzimwe nyika.
Naizvozvo, semutengi, kana iwe uine chero mibvunzo nezve chiedza chekushandisa, unogona kutibvunza pane peji rekubvunza, isu tinofara kuzvigadzirisa.
Kunyangwe kana pasina chibvumirano, chiitiko chakakosha chekutaurirana chinogona kutibatsira kuita zvirongwa zvirinani mune ramangwana rekutengesa maitiro.